musha nyika dzakabatana Comedians Bhiri reCosby reChikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaBill Cosby inotaura Chokwadi pane yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Vasikana / Wife / Nyaya, Vana, Chitendero, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Iko kuongorora kwakadzama kwenyaya yehupenyu hwake kutanga kubva pamazuva ake ekutanga chaipo kusvika paakazozivikanwa.
Unogona kungomuona paTV kana kunzwa nezvake dzimwe nguva. Kunge Steve Harvey, ndomumwe wa America's 50th yakanyanya kumira-up comedians yenguva dzese.
Anonyanya kuzivikanwa kuti 'Baba veTV veAmerica,' Bill zvakare anogadzira TV, munyori, uye mutambi anozivikanwa zvakanyanya nebasa rake saCliff Huxtable muCosby Show. Inzwa wakachengeteka kunyangwe isu patino vhenekera uye tichikupa iwe unogadzira biography yeBill Cosby.
Bhiri reCosby Childhood nyaya:
Kune vanotanga Bio, mazita ake akazara ndiWilliam Henry cosby Jr. Bill Cosby sezvo achinzi anozvarwa akaberekwa musi wegumi nemaviri waChikunguru 12 kuna amai vake, Anna Pearl Cosby uye baba, William Henry Cosby, Sr iri Muguta muPennsylvania, United Nyika.
Isu tinoziva mutambi mutema ane mukurumbira kuti ave nekuratidzira kwekunyepedzera kunyangwe achiri mudiki. Bill Cosby aida mitambo uye aigara achisekesa achitenderera; zvekuti kunyangwe kudzidza kwakava basa rekukwira.
Shamwari dzake nemhuri yake havana kumboona hunhu hwake hwekusetsa kuve kutanga kwechaizomuzivisa kupasirese.
Semwana, Cosby aida komedhiyo redhiyo. Aigara achivateerera, sekutaura kune Los Angeles Times. Iye zvakare aigona pakugadzira zvinhu.
Kunyangwe mumwe wevadzidzisi vake kuchikoro akataura kuti William anofanirwa kuwana achiita kana kuita Gweta sezvo achigona kureva nhema zvakanaka.
Zvinosuruvarisa, kuma8, Cosby akarasikirwa akakosha apo mukoma wake James, wechipiri wechipiri wevakomana, akafa.
Bill Cosby Mhuri Yekumashure:
Imba yevaraidzi, kunyange zvazvo yakanga isiri rudzi rwakapfuma, yaingova nezvinhu zvishoma zvokugona kuitarisira.
Bill Cosby chikamu chemhuri yakajairika ina baba, amai uye ndiye dangwe pakati pevamwe vanun'una vake vatatu (3). Aive nemusikana webasa saamai uye Baba vasipo.
Bill Cosby Mhuri Dzinobva:
Kungofanana nevatema vazhinji muUS, 'America's TV Baba' nemhuri yake vakateedzera madzitateguru avo kusvika panguva yekutengeswa kwevaranda.
Tateguru anonzi Maria. Dzinza raBill Cosby kubva kuna Maria rakawanikwa mu1985 mushure mekunge varaira wedzinza kuti aite zvakadzama tsvagiridzo yezvaakabva.
Ndiye muzukuru wechizvarwa chechitanhatu chemuranda akataurwa ainzi Maria. Kuferefeta kwakaratidza Zachariah "Zach" Cosby sasekuru vaBill Cosby.
Zvichakadaro, vabereki vaZack Cosby nasekuru nasekuru vanozivikanwa saSam Thomas Cosby naMaria, mumwe nemumwe.
Tichifunga kuti mutambi ane mukurumbira ndewemuAfrica, zvinomuita afro-American. Uye nekuda kwekuzvarwa kwake, Bill Cosby anobva munharaunda yeGermantown inoyevedza; kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwePhiladelphia muPennsylvania, US.
Mepu inoratidza yaBill Cosby yekuGermantown kwakatangira.
Bill Cosby Dzidzo:
Tisati tafambira mberi pabasa rekuumba hunhu hwedu hwakatarisisa, ngatitarisei kuzvikoro zvaakapinda. Bill akaenda kuCentral High School, Philadelphia, neGermanantown High School, Gerstown, Tennessee.
Bill Cosby muChikoro chepamusoro.
Mushure megiredhi regumi, Bill Cosby akave chikamu cheNavy uye aifanira kupedza chikoro chake chepamusoro kuburikidza nekosi yetsamba.
Uye paakanyoresa muNavy, akapasa bvunzo dzechikoro chepamusoro-soro, uye mushure mekunge vapa kuburitswa kwake chikoro chemitambo kuTemplate University muPhiladelphia muna 1961 kuti vadzidze Fizikisi.
Bill Cosby Biography Nhau:
Ndichiri kuchikoro chesekondari, Baba vemuAmerica vemberi vakazvitsvakira zvavo. Akatanga kupenya shangu, akashanda muchitoro, uye aive bhawa.
Achiri kubhawa, maitiro ake ari nyore kuenda uye majee ane hungwaru nevatengi zvaizoratidza sarudzo yake semusimuki akasimuka.
Bill Cosby Bio - Mugwagwa unoenda Mukurumbira:
African American Star yakasiya Temple University kunovaraidza kuGaslight Cafe kuGreenwich Village, New York City.
Akagadzira chiratidzo chekodhi dhizaini inoratidzirwa neanoshamwaridzika, anowanikwa padanho munhu aine akasununguka, akanyatso kuendesa nguva.
Bill Cosby paNBC TV muna 1966.
Pamakumi maviri (26), Bill Cosby aive neTV yake yekutanga paThe Tonight Show. Akaita nyeredzi Johnny Carson.
Nenguva isipi, Cosby akatyora zvipingamupinyi paakava wekutanga muAfrica muAmerica kuita nyeredzi mumutambo wenguva dzose weterevhizheni nebasa rake semumiriri wehurumende pa'I Spy.' Iwo akatevedzana akamhanya kwemwaka mitatu (3) uye akamuwanirawo mibairo mitatu (3) Emmy.
Mamwe mapurojekiti eTV aBill aisanganisira akati wandei akateedzana eBill Cosby Specials, iwo musiyano unoratidza The New Bill Cosby Show (1972-73), uye mamiriro ezvinhu anosetsa Iyo Bill Cosby Show.
Munguva yemakore ekuma1970s, aigara achionekwa pane vana edzidzo nhepfenyuro Iyo Electric Company uye inozivikanwa Sesame Street iyo yakamuendesa kumukurumbira wekotuni katuni, Fat Albert neCosby Kids (1972-1984).
Wechidiki Bill Cosby mumazuva ake ekutanga ebasa.
Kubudirira kwekabhokisi kwakachinja kudzoka kwake kukoreji kuti atore BA kubva kuTemberi University (1970), uye MA (1972) madhigirii kubva kuYunivhesiti yeMassachusetts.
Bill Cosby Biography - Kumuka kune Mukurumbira:
Basa rakabudirira kwazvo revarombo vemakomiki; Iyo Cosby Show, iyo yakaonekwa paNBC kubva muna 1984 kusvika 1992 uye ndeimwe yeanonyanya kufarirwa mamiriro emamhanzi munhoroondo yeterevhizheni.
Iyo showa yakayambuka kutsika kwetsika uye yakahwina mibairo mikuru yakati wandei. Kana show yainge yapera, Bill akaonekwa mune akateedzana anozivikanwa saCosby kubva 1996 kusvika 2000.
Ma rekodhi ake ehukama akamuwanira masere Grammy Awards. Vakapa cosby doctorate padzidzo kubva kuYunivhesiti yeMassachusetts muna 1977 uye vakapinda muTerevhizheni Hall of Fame muna 1984.
Gore ra2008, Bill akasunungura muimbi ye hop-hop inonzi cosby Narratives Vol. 1: Iyo State of Emergency, yakasanganisira funk, pop, uye jazz. Kunyangwe yaive neinosvibisa zvishoma; izvo zvaakati fananei nezvakawanda zvemimhanzi yehip-hop.
Cosby anoyeukwa zvakanyanya nekuda kweCosby Show (1984-1992), iyo yaakagadzira uye akaisa nyeredzi mukati. Iyo inokwezva nhevedzano yakaratidza yakapfuma, yakangwara, uye yakabudirira mhuri yevatema yeAmerica.
Inoita seakakurumbira akateedzana muAmerican TV nhoroondo. Iyo gore 1986, Bill Cosby akazove munyori pamwe nekuburitswa kwebhuku rakanzi, Kuva Baba. Aizoenderera mberi kutsikisa mamwe mabhuku gumi, ese maBestellers.
Iye wePhiladelphia wekuzvarwa ari panhamba yebasa rake.
Bill Cosby: Kudonha kwake kubva ku 'Baba veAmerica' (zvirevo zvekushungurudza vanhu zvepabonde)
Iye Veteran anga ari nyaya yekuburitswa chibharo, kushungurudzwa pabonde, kushungurudzwa kwevana pabonde, uye kupomerwa bhatiri repabonde nevakadzi vazhinji kubvira 2000.
Mhosva dzake dzepamberi dzakadzoka pakati pemakore '60s. Cosby aigara achiramba zvaaipomerwa, achiti zviitiko izvi zvinobvumirana.
Zvizhinji zvezviitiko zvinofungidzirwa kubva kune avo vaimupomera zvakawira kunze kwemiganhu yemirawo yaidikanwa kuti kuitwe zviri pamutemo Mukumuka kwezvaipomerwa, anenge munhu wese akabatana uye pamwe neCosby brand yakacheka hukama naye.
Dare rakadhonza marongero eiyo The Cosby Show uye zvimwe zviratidziro zvine Bill kubva pakuve pamhepo.
Mu2015, Cosby yakava nyaya yemasutu ehurumende masere, ayo akazosimuka ave makumi matatu nematatu. Mwaka 33, musi wa2018 Kubvumbi Pennsylvanian, Jury rakaona Bill Cosby aine mhosva ye26 nhamba dzekubatwa chibharo.
Kutevera munguva pfupi, Nyamavhuvhu 2018, dare rakatongera Cosby makore matatu kusvika gumi kujeri rehurumende.
Nekudaro, Bill akavharirwa kuchitokisi chimwe chete musarudzo dzevatungamiriri paSCI Phoenix muPennsylvania asi akazotamira kuvanhu vese vemujeri muna Ndira 2019.
Nekudaro, muna Zvita wegore rimwe chetero, Bill akarasikirwa nechikumbiro chakapidigura kutongwa kwake. Cosby arikushandira matatu kana gumi-gore temu yekushandisa zvinodhaka nekushungurudza mukadzi weToronto Andrea Constand imomo muna 10.
Bill akaperekedza kujeri.
Vanopfuura vakadzi makumi mashanu vakapomera nyeredzi yekubatwa chibharo kana kubata chibharo, asi nekuda kwenguva yakatarwa pamatare muUS, mumwe chete - Andrea Constand - ndiye akaendesa nyaya iyi kudare rematsotsi.
Muchato waBill Cosby uye hupenyu hwemhuri hunonetsa kwemakumi emakore:
Iye nyeredzi nyambo uye mutambi akaroora mukadzi wake, Camille Olivia Cosby (nee Hanks) kubvira 1964. Muchato uyu wakakudza vana vashanu (5)
Vakasangana pamusi webofu pane imwe nzvimbo ye bowling muchirimo cha 1963. Cosby, pazera remakore 25, akaonekwa muRuwa rweColumbia nokuda kwegigi pane kirabhu duku munharaunda yake; Georgetown. Apo Camille; mudzidzi weYunivhesiti yeMaryland.
Muna 1971, makore manomwe mushure memuchato wavo, Bill nemudzimai wake vakaramba vakazvipira kuita kuti imba yavo ishande zvisinei nekuvhiringidzwa neHollywood.
Mufananidzo wepakutanga waBill Cosby nemukadzi wake.
Vabereki vaCamille Hanks vainetsekana kuti airatidzika kunge mudiki. Zvisinei, vaviri vacho vakatanga hukama hurefu. Hukama hwaive hwakareba kubva Cosby adzokera kuNew York. Mugore rinouya, Camille aizosiya koreji.
Zvichakadaro, vabereki vake, mukuzeza, vakapa maropafadzo avo kumuchato waCamille ane makore 19.
Baba Carl Dianda vakaita mhemberero yemuchato, mune hombe hombe yakawanda pane imwe chechi yeKaturike muOlney, Maryland.
Camille akaratidzira chitarisiko chinokatyamadza uye ambience pamhemberero iyi. Zvinorangarirwa kuti Cosby akazvizivisa kumupristi nekumupa imwe yezvinyorwa zvake zvekuseka.
Hazvisi pachena kuti Camille aiziva zvakadii nezve zviitiko zvaBill zvine mumvuri panguva yeLos Angeles makore. Zvitanhatu (6) zvezvinhu zvinopomerwa Cosby zvese zvakadzokera kunguva imwechete.
Carla Ferrigno, mumwe weavo vakaurayiwa, akaudza KFI Radio kuti Cosby akaedza kumurova kumba kwake mu1967.
Uye Kristina Ruehli, parizvino ambuya vane makore makumi masere nemanomwe ekuberekwa vane masere (71) akaudza Philadelphia Magazine kuti anotenda kuti Cosby akamudhakisa makore maviri apfuura uye akamumanikidza kuti aite bonde nemukanwa paakamuka.
Kupatsanura mhuri yake kubva mukuparadza kweHollywood, Camille aizoenda nevana vavo kuShelburne Falls, Mass.
Zvichakadaro, Bill Cosby aizofamba pakati peLos Angeles, kwaaizoenderera mberi achishanda, nenzvimbo nyowani yemhuri. Nehurombo, kufamba kwacho kwakatendera Bill Cosby kurarama hupenyu huviri-hwakajairwa.
Aine mudzimai wake anenge makiromita 5,000 kubva kure, Cosby akatanga kudanana naShawn Berkes, waakasangana naye pane imwe nightclub yeLos Angeles. Berkes akazosangana naCosby ndokuti akabereka mwana wake.
Nguva yekunetsana ikoko inoita seinoenderana nezera raBill remakore gumi ari muwanano. Camille Cosby akaudza Oprah Winfrey kuti murume wake, kusanganisira iye, akanetsekana nemaitiro "eudyire" asi akasarudza kuramba achizvipira kuhukama hwavo.
Mumatare edzimhosva, anopfuura makumi maviri (2) makumi emakore mushure mekudanana kwaCosby, akapupura kuti akabhadhara $ 100,000 kuchengetedza hukama hwake hwekunze hwakavanzika. Mwanasikana waBerkes - Autumn Jackson, uyo airatidzika kunge munhu mukuru - aizoshandira nguva yejeri nekubira.
Camille Cosby akajekesa zvakare mubvunzurudzo naWinfrey, akabvuma kuti ndiye akazivikanwa nezvenyaya iyi pamberi pekuyedza kubiridzira.
Bhiri panguva panguva yesutu yake yekurwisa.
Na 1992, Camille Cosby akawana doctorate mune dzidzo. Aizoenderera mberi nekugadzira mutambo unohwina mubairo uye Co-akawana chirongwa chekuchengetedza nhoroondo yeAfrica America. Zvakadaro, zvido zvake zvehunyanzvi zvinoongwa izvo zvemurume wake.
Mitoro yebasa raCamille yaive nemidzi yekunyora kwake, iyo inotarisa pamhedzisiro uye zvisirizvo mifananidzo yevanhu vatema paTV vane kuzviona kwavo kwevatema vechidiki.
Nezve imba yake, akanyora kuti:
“Bill, neni taive vadiki kwazvo patakaroorana. Bill, ane makore 26, ini ndaive nemakore 19. Taifanira kukura uye kudzidza kuti rudo rusina udyire runosanganisirei, uye takazviita. Patakazvipira kune mumwe nemumwe ane rudo makore apfuura, muchato wedu wakave wakanaka uye wakasimba. Uyezve, takakura semunhu mumwe nemumwe. Muchato wedu ndewekudanana, kuremekedzana, kutaurirana nekuvimbana. ”
Bill Cosby Hupenyu Hwemhuri:
Izvo zvinonzi nhengo dzemhuri ndicho chinhu chakakosha zvakanyanya muhupenyu hwemwana. Iwo maCosby akapedzisira achigara muRichard Allen Dzimba, chirongwa chedzimba chine mari yepasi. Vana vaive nezvishoma zvavaitarisira kubva kuvabereki vavo. Uye saka vaifanira kuzvishandira zvinhu ivo vega.
Zvizhinji Nezve Baba vaBill Cosby:
Iyo comedy protege yaive nababa vasipo. Mazita ake aive William Henry Cosby Sr, akazvarwa musi wa9 Kurume 1913. MuVirginia, US.
Aive mwanakomana wababa vake, Samuel Cosby, naamai vake, Gertrude Thornhill. Akaroora nezve 1936 muPhiladelphia, Pennsylvania, kuna Bill Cosby, amai vaJr.
Pakutanga, Cosby Sr aigona kuwana nemari, asi mari yakatsvedza paakatanga kunwa zvakanyanya. Akashanda nyika yake semufambisi wengarava muUS Navy. Nekuda kweizvozvo, zvaisawanzo kuvepo. Bill akakura achishanda semubereki kune vakoma vake. Akafa muna 1974.
Zvizhinji nezve Amai vaBill Cosby:
Nemari yainetsa mhuri, nzira chete yekubuda nayo yaive yekuwana basa, ndisingafunge kuti zvaidzikisira sei uye kurayira.
Amai vaCosby, Anna Pearl, vakave musikana webasa wekubatsira kuchengetedza imba yake. Zvisinei nekutambudzika kwavo, akasimbisa kukosha kwedzidzo nekudzidza.
Aiwanzo verengera mabhuku kuna Bill Cosby nehama dzake. Iwo mabhuku zvakare anosanganisira iro Bhaibheri uye zvakare mabasa naMark Twain.
Bill zvakare ane tarenda mutauri wenyaya iye, akadzidza pachine nguva yakakwana kuti kuseka kungave nzira yekuita shamwari uye kuwana zvaaishuvira.
Zvizhinji Nezve Vana vaBill Cosby:
Iyo yekureba-nguva yekuroora yemukurumbira comedian yakaburitsa Vashanu (5) vana. Dangwe ari Erika, akazvarwa muna 1965; akateverwa nekukurumidza naErin, akazvarwa muna 1966. Vamwe vake vana Ennis, Ensa, naEvin vakazvarwawo muna 1969, 1973, na1975 saizvozvo.
MuAmerican Comedian naCamille nevana vavo.
Erika Ranee Cosby, wekutanga pakati pavo, mupendi wenguva yeAmerica uye aive purofesa weAdtct weArt kuNew York University. Erinn Chalene Cosby, mwana wechipiri ndiProfessional Photographer.
Zvichakadaro, Evin Harrah Cosby anova ndiye mudiki muridzi wemuzvitoro wepamusoro uye kurudziro yaRudy Huxtable pachirongwa cheCosby Show.
Bhiri nemumwe wevanasikana Vake, Erika Ranee.
Zvakashata, Bill nemukadzi wake vakarasikirwa nevana vavo vaviri. Ennis mwanakomana mumwechete, aine makore makumi maviri nemanomwe, akapondwa musi wa27 Ndira 16 mukuyedza kupamba apo aichinja tai rakaputika kudivi repakati.
Zvakare, mwanasikana wavo Ensa akafa nechirwere cheitsvo apo vakamirira kuisirwa itsvo musi wa 23 Kukadzi 2018.
VeCosbys vane vazukuru vatatu (3). Kunze kwevatatu, Evin ane vana vaviri (2) vana; nepo mushakabvu Ensa aine mwana mumwe (1).
Zvimwe Zvizhinji nezveVanun'una vaBill Cosby:
Hunhu hwekunakidzwa hune hutatu (3), hama. Mazita avo anosanganisira anotevera; Russell Cosby, James Cosby, Robert Cosby.
Dyslexia inomhanya mumhuri yeCosby. Bill haana kuiwana nhaka, asi munin'ina wake Russell Cosby akazviwana (asingazive kusvikira ave mukuru).
Zvinosuruvarisa, James akafa aine makore matanhatu ekuberekwa; apo Bill aive nemakore masere (8). Bhiri Cosby, Ph.D. uye vanin'ina vake vakafarira kukosha kubva kuna amai vavo.
Zvimwe Zvizhinji nezveHama dzaBill Cosby:
Kune rimwe zera semakore makumi masere nematatu (83) makore aine vakoma nevatezvara, anofanira kuve nehamawo. Vanozivikanwa vashoma vehama dzake vanosanganisira anotevera. Martin McLean, anova mukuwasha waBill; Ensa murume. Martin akabatsirawo kurera mwanasikana waEnsa.
Merisa Parson Davis ndeyeMabhiri Cousin. Iye munyori weChikristo bhuku uye mutauri wevakadzi veMusangano. Merisa anogara achitaura achidzivirira hama yake Cosby.
Braxton Cosby, anomhanyisa kambani yeMabhiri, Cosby Media Productions, anohwina mubairo sci-fi munyori wenhau, wega mudzidzisi, mutambi, uye muzvinabhizimusi. Isu tinomuziva iye 'Musungo', 'Kukunda' (2017) uye 'Dombo uye rakaoma'; firimu rinotarisana nechiKristu.
Merisa Davis foto naiye hubby.
Braxton muzukuru waBill Cosby uye haana kukundikana kuratidza rutsigiro rwake rusingaperi mumiedzo yaBill. Akafamba nababamunini vake, Bill Cosby, mu2012 apo vese vari vaviri vaisimudzira mabhuku matsva. Braxton anogara kuAtlanta nemukadzi wake nevana vatatu.
Mufananidzo weMuzukuru waBill.
Bill Cosby Hupenyu hweMunhu:
Iyo veteran comedian inozivikanwa neyakajairira ayo anoratidza iwo hutsinye hwechinhu chiri chose. Kunyangwe kubva pakudya chokoreti keke sekudya kwekuseni kusvika mukutaura nemuromo uzere novocaine. Iyo yakajeka Democrat uye yakanyatso taura nezve nhamo yenharaunda yeAfrica -America.
Zvido zvake zvinosanganisira Kutamba Nhabvu neBaseball, Kuunganidza matsime ematsime, uye Postage Stamp Unganidzo. Bill anofarirawo michero yakazara Danish uye Fried matapiri.
Mutambi wenhabvu mukuita.
Bill Cosby Mararamiro:
Bill Cosby yaimbove yakakosha kusvika madhora mazana mana emadhora, sekureva kweMari. Basa rake refu muTV nefirimu rakamupa rombo rakanaka. Muna 400, akawana mari inosvika madhora miriyoni pagore kuThe Cosby Show. Kwake masosi ehupfumi aive rake rehunyanzvi basa seVose comedian uye mutambi.
Basa raakamboita semutauriri wemhando dzakadai seCoca-Cola naJell-O vakapinza mari yakati wandei, sekuita kwaakaita kusimuka.
Ane yake BMW 2002 tii modhi kubva kuma1970. Iyo tii inonzi ndiyo inonyanya kudiwa modhi. Iko kukosha kwemotokari kunotanga pa $ 26,800.
Bhiri Inodhura Mota; BMW 2002 modhi kubva kuma1970.
Pakati pemakore makumi masere, Bill akazove munhu anobhadharwa zvakanyanya muvaraidzo pasirese. Sekureva kwaForbes, mihoro yake yaisvika pamamirioni makumi masere emadhora. Kunyangwe mushure mekunge Iyo Cosby Show yasvika kumagumo, mugadziri wayo akaramba achiunganidza mari yakawanda. Iyo showa yakawana Bill anenge madhora 80 bhiriyoni kwemakumi emakore kubvira payakabuda mumhepo.
Ted Bundy Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Bill Cosby Chokwadi:
Kunyangwe isu patinotenderedza yedu yehucheche nyaya uye Biography chinyorwa. Zvinotifadza kupawo rumwe ruzivo iwe rwaungangodaro usinga zive nezve 39th ane mukurumbira mu Africa. Pasina kumwe kunonoka, ngatitorei bhora kutenderera.
Chokwadi - # 1: Vanakomana vaRufu Cosby
Iro gore 1977, rakaona mwanakomana mumwe chete waBill Cosby, Ennis William, anova mukwikwidzi wezvechiremba paColumbia's Teachers College, uyo akakunda dyslexia uye kuronga basa rekudzidzisa vadzidzi vakasarudzika vakachinja tai pakati pehusiku muCalifornia padivi pega pega nzira yemugwagwa. Akapfurwa ndokuurayiwa pazera, makumi maviri nemanomwe.
Chokwadi - # 2: Chitendero chaBill Cosby
Cosby akaberekerwa mumhuri yevaviri-vechitendero: Methodist neBaptist. Zvinotoshamisa kuti, Cosby haisi yese yechitendero. Anoti anozvibatanidza nemasangano maviri.
Nekudaro, kana zvasvika pakuenda kuchechi, kana neimwe nzira kuratidza kutenda kwake, iye ari nani kune "asiri muvhoti".
Kunyangwe semushamarari webasa, haana basa nekushandisa chinamato neBhaibheri kuita majee. Akaisa zvikamu zvakakura zvebhuku rake kuti atsemuke zvine hungwaru nezvenyaya yaAdamu naEvha, Noa, uye nevamwe vazhinji vemuBhaibheri. Zvakangodaro, Bill Cosby muPurotesitendi wechiKristu.
Chokwadi - # 3: Anopa rubatsiro
Kwemakore apfuura, Cosby akapa mazana emadhora kuti atsigire mikana yekudzidza kune vanhu vekuAmerican, kusanganisira donho ra1988 remamiriyoni makumi maviri kuSpelman College, chipo chikuru kune chimwe chete kuna HBCU.
Bill nemudzimai wake, Camille muna 1997, vakatanga Shuwa shamwari / Ennis William cosby Foundation vachirangarira mwanakomana wavo kupa mari vadzidzisi vevadzidzi vane hurema hwekudzidza.
Chokwadi - # 4: Yake Yakakurumbira Quote
"Handizive kiyi yekubudirira," anodaro Bill Cosby. "Asi chakakosha kukundikana kuedza kufadza munhu wese."
Chokwadi - # 5: Mamwe maBhiri eCosby Chokwadi:
Vana vake vese vane mazita anotanga neE, kuratidza hunhu hwatinofunga. Akasarudzirwa 17 Grammy Awards uye akahwina mapfumbamwe. Asarudzwazve sere Primetime Emmy Awards uye akahwina mana. Uye mimwe mimwe mizhinji mibayiro inosanganisira iyo yega yekufamba kwengarava
Bill Cosby achigamuchira iyo Lone Sailor Award.
Mudzimai waBill Cosby, Camille anga akaroora mukwikwidzi anomira kweanopfuura makore makumi mashanu uye achiri kuverenga.
Zvichakadaro, Phylicia Rashad uyo akatamba mukadzi waCosby mumasevhisi maviri eterevhizheni; Mamwe mashoko anoti vakadzi vese ava havana kumbobvira vazununguka mukutsigira kwavo Bill, mungave muchivande kana pachena.
Isu tinofungidzira kuti wakaona zvichinakidza, kuverenga yedu Bill Cosby nyaya yehudiki.
Takaona kuti pfungwa yake yechinangwa uye kutsunga zvakagovera sei mikana yaidiwa zvikuru yaaida kuti ave nyeredzi.
Uye zvechokwadi, mikana sezvakangoita mamwe Comedian akatora - eg- the likes of Ellen Degeneres akakudzwa zvizere.
Pasinei nezviitiko zvese zvakaipisisa zvakaitiswa naWilliam Cosby Jr. (PhD) mukugara kwake kupfupi pasi, mushambadzi anozivikanwa akatara gomarara, mutambo wemuTV uye vatambi-vanosanganisira Sesame Street - uye akachengetedza muchato wakaratidza. makore makumi mashanu nemashanu pamusi wa50 Ndira, 25. Iye nemukadzi wake vakaenderera mberi nekutsigira masangano mazhinji uye nerupo.
Haven akataura zvese izvo, zvinofadza vedu kuti unoita zvakanaka kuudzawo ruzivo rwako nesu. Kunyangwe isu tichiramba tichikuunzira humwe bhaibheri chokwadi nezvakanyanya-notch chokwadi uye kurongeka; kunaya, uya kupenya. Gara wakabatana!